La kulan Elaine, Qaataha Cuntada - Cuntooyinka Lugaha
La kulan Elaine, Cunto qaateha
Elaine waxay si madax-bannaan ugu nooshahay gurigeeda Plymouth, Minn., Guri - isla gurigii ay ku soo barbaartay shan carruur ah, oo ay ku noolayd in ka badan 50 sano. Waxay wali ku raaxeysataa booqashooyinka soo noqnoqda ee carruurteeda, iyo ayeeyadeed, waxayna ku dhex socotaa eeygeeda Molly xaafadda laba ama saddex jeer maalin kasta. Waxaad dhihi kartaa waxay aad u jeceshahay halka ay ku nooshahay, waxayna ku qaddarisaa Cunnooyinka Gawaarida si ay uga caawiso inay halkaas joogto.
Ka dib markii laga helay cudurka Alzheimers ee 2006, Elaine waxay ku jirtaa caafimaad jireed oo weyn, laakiin waxay leedahay xoogaa dhibaatooyin ah xusuusteeda muddada gaaban. In kasta oo ay awood u leedahay inay ka baxdo oo socod ku soo gasho oo ay guriga dhex mushaaxdo dhibaato la'aan, saddexda cunno ee ay hesho toddobaad kasta waxay siisaa inta caawimaad dheeraad ah ee ay u baahan tahay si ay ugu sii noolaato si farxad leh gurigeeda.
Wax yar ka baro Elaine:
Sababta ay isku diiwaangelisay in ay cunto hesho:
Diyaarinta cuntada waa hal aag oo Elaine ay ku isticmaali karto xoogaa caawinaad dheeri ah. Maaddaama aysan mar dambe baabuur wadin, helitaanka dukaanka raashinka way adkaan kartaa, sida xusuusinta dhammaan walxaha ay ugu baahan tahay inay cunto ku diyaariso. In kasta oo seddex cuno usbuucii aysan umuuqan karin waxbadan, waxay aadayaan waddo aad u dheer dhanka ka caawinta iyada inay si madax banaan u noolaato
Waa maxay sababta ay u jeceshahay Cuntada Lugaha:
Cuntada! Tayada iyo tirada labadaba, maadaama ay caadi ahaan haysato cunto ku filan laba cunto maalintaas. Marka lagu daro cuntada, waxay jeceshahay in booqashooyinka laga helo iskaa wax u qabso oo ay ku raaxeysato la sheekeysiga iyaga dhowr daqiiqo markii ay ka dhacdo cunnadeeda.
Cunnada ugu jecel Turkiga, baradhada shiidan iyo digirta, iyo digir. Iyo macmacaan kasta!
Faa'iidooyinka kale: Madaxbanaanida ayaa muhiim u ah Elaine. Ninkeeda Don wuxuu dhintay isagoo 50 jir ah, kaligeedna waxay ku nooshahay kaligeed 35 sano kadib. In kasta oo ay jeceshahay in carruurteeda iyo awooweyaasheeda ay ag joogaan - wiilkeeda ugu yar ayaa shan guri ka fog - ma rabto in ay had iyo jeer ku dukaameystaan ama wax ugu karsadaan.
Sida kuwa kale ee cuntada qaata, Elaine waxay heshaa waxa kaliya ee ay ugu baahan tahay si ay nolol caafimaad leh ugu haysato guriga: cunno nafaqo leh oo dhadhan fiican leh iyada oo lagu daray faa iidada isdhexgalka bulshada!